Khudbadihii Madaxweyne Farmaajo ee Kalfadhiyada Gollaha Shacabka Oo Iska wada hor Yimid! – Idil News
Kalfadhigii koowaad ”
gollaha ayuu madaxweynuhu sheegay in dowlad walba in ay leedahay hal ku dhig iyo astaamo u gaar ah, sidaa darteedna hal ku dhigga dowladdiisa uu yahay “ Dib u heshiisiin iyo Dib u habaynta Gudiyada cadaalada iyo Maxkamadaha.
Kalfadhigii seddexaad,ayuu madaxweyne Farmaajo kaga hadlay dib u xorreynta dalka iyo soo celinta wadaniyadda.La dagaalanka musuq maasuqa.
Waxaa uu kaga hadlay arrinta la xiriirta isxilqaan oo uu sheegay in dowladdiisa ay hormuud u noqotay sanado badan kaddib.Iskaashiga dawladaha Geeska afrika .
Danjire Maxamed Maxamuud Caalim, oo ah aqoonyahan, siyaasi wax ka Qora siyaasada Geeska afrika. Gaar ahaan somalia.wax ka badan 30 sano, Email: Caalim68@hotmail.com